Weather मौसम अनुप्रयोगहरू ताकि मौसमले तपाईंलाई गार्डबाट पक्रन सक्दैन 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
छाताविना घर छोड्दा मौसमको पहरामा को पक्रन सकेको छैन र? वा तपाईं चिसो जाँदैछु भन्ने सोच्दै बाहिर जानु भयो र सब भन्दा ठूलो सूर्य भयो? यी र अन्य कारणहरूको लागि, राम्रो मौसम पूर्वानुमान अनुप्रयोग हुनु अगाडिको अप्रत्याशित घटनाहरू जोगिन महत्त्वपूर्ण छ। सबै पछि, मौसम हामीलाई मद्दत गर्न त्यहाँ छ।
आज त्यहाँ दर्जनौं मौसम पूर्वानुमान अनुप्रयोगहरू छन् जस्तै अप्ठ्यारो क्षणहरूबाट बच्न, जस्तै काममा भिजेको वा पार्कमा त्यो पिकनिकको दिनमा घाम नपिउने जस्ता। किन SeoGranada आजको सर्वश्रेष्ठ संग यो सूची बनायो। चेक आउट गर्नुहोस्:
AccuWeather सबैभन्दा प्रसिद्ध मौसम अनुप्रयोगहरू मध्ये एक हो। यो पनि एक धेरै सही, वास्तविक समय मौसम जानकारी प्रदान गर्ने, धेरै उत्तम सुविधाहरूको साथ एक हो।
AccuWeather द्वारा प्रयोग गरिएको टेक्नोलोजीले आज उपलब्ध एक भन्दा विश्वसनीय मौसम पूर्वानुमानलाई सुनिश्चित गर्दछ। आँधीबेहरी र / वा मौसममा अचानक परिवर्तनहरूलाई सचेत सतर्कताहरू मार्फत चेतावनी दिइन्छ, त्यसैले कोही पनि अप्रत्याशित मौसम घटनाबाट होसियार हुँदैन।
आज देखि वा दुई हप्ताको लागि पूर्वानुमान हेर्न सम्भव बनाउनुको अलावा, एक्युवेदरले हावा, आर्द्रता र बतास चिसलको बारेमा जानकारी प्रदान गर्दछ।
AccuWeather डाउनलोड गर्न, अपरेटिंग प्रणाली छान्नुहोस्: एन्ड्रोइड / आईओएस।
खगोल विज्ञान अनुप्रयोगहरू वास्तविक समयमा ब्रह्माण्ड अन्वेषण गर्न
क्लाइमेटिम्पोको साथ तपाई कहिँ पनि मौसमको बारे सचेत हुन सक्नुहुन्छ। तपाई वास्तविक समयमा चेक गर्न सक्नुहुनेछ, प्रति घण्टाको साथमा, दैनिक वा अर्को दिन डाटा पनि।
सबै चीजलाई अझ आकर्षक बनाउन, मौसम सम्बन्धी समाचारहरू प्राप्त गर्न र विश्वमा के हुँदैछ भनेर सचेत हुन सम्भव छ। मलाई यो मन पर्छ विजेट अनुप्रयोगबाट, सामग्रीको प्रकार चयन गर्नुहोस् र घर वा लक स्क्रिनबाट सीधा पहुँच गर्नुहोस्।
एप्लिकेसनमा वायु गति, दृश्यता, वायुमण्डलीय चाप, सूर्योदय र सूर्यास्त समय, वायु आर्द्रता, आदिमा जानकारी छ। अनुप्रयोग अझै आँधीबेहरी ट्र्याक गर्दछ।
क्लाइमेटिम्पो डाउनलोड गर्नका लागि अपरेटिंग प्रणाली छान्नुहोस्: एन्ड्रोइड / आईओएस।
Yah. याहू टेम्पो
यो मौसममा आउँदा सबैभन्दा प्रयोग हुने अनुप्रयोग मध्ये एक, याहू मौसम सँग एक सहज र रमाइलो डिजाइन छ, स्थान, समय र मौसम अवस्था समायोजन धेरै फोटोहरू ल्याउने।
जानकारी विस्तृत र विस्तृत रिपोर्टमा प्रस्तुत गरिएको छ, आगामी १० दिन सम्मको मौसमको एक सिंहावलोकनको साथ। एक अन्तर्क्रियात्मक नक्शामा, तपाईं विभिन्न ठाउँहरूमा तापक्रम र बतासको दिशा र गति पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ।
खराब मौसम सचेतले तपाईंलाई आफ्नो दिनको योजना बनाउन मद्दत गर्दछ, साथ साथै रोचक एनिमेसनहरू जसले डेटा प्रदान गर्दछ जस्तै सूर्योदय र सूर्यास्त र वायुमण्डलीय दबाव। अल्ट्राभायोलेट (UV) किरणको घटना पनि उपलब्ध छ, साथ साथै हावा आर्द्रता पनि।
याहू टेम्पो डाउनलोड गर्नका लागि, अपरेटिंग प्रणाली छान्नुहोस्: एन्ड्रोइड / आईओएस।
Weather. मौसम र रडार
द्रुत मौसम पूर्वानुमानको साथ, क्लाइमा र रडारको साथ तपाईं अबको २ 24 घण्टा वा १ 14 दिन तापक्रम रोक्न सक्नुहुन्छ। प्लस, अवश्य पनि, दर्जनौं अन्य डेटा पार्कमा त्यस दिन बर्बाद पार्ने जोखिम बिना, सबै योजनाको रूपमा राख्नको लागि!
हावाको वेग, दृश्यता, वर्षाको सम्भावना, सूर्योदय र सूर्यास्त समय, थर्मल सनसनी, अन्य धेरै जानकारीहरूको बीच प्रमाणित गर्न अझै सम्भव छ। सहि डाटा छ, तपाईं अनुप्रयोगमा सहि स्थान समावेश गर्न सक्नुहुन्छ।
मौसम र रडार डाउनलोड गर्नका लागि, अपरेटिंग प्रणाली छान्नुहोस्: एन्ड्रोइड / आईओएस।
Brazil. ब्राजिल समय
टेम्पो ब्राजिलको सब भन्दा चाखलाग्दो पोइन्ट्समध्ये एक यथार्थपरक एनिमेसनको सम्भावना हो जसले मौसम परिवर्तनलाई द्रुत रूपमा कल्पना गर्न अनुमति दिन्छ। निरन्तर अद्यावधिकको साथ, सबै जानकारी सजिलै सहज सहज इन्टरफेसमा फेला पर्दछ।
तपाईले १० दिन अगाडि मौसम जाँच गर्न सक्नुहुनेछ। सबै एक विस्तृत रिपोर्ट मा, जो वर्षा, हावा, पराबैंगनी रे, वायुमंडलीय दबाव, अन्य धेरै डाटा बीचमा जानकारी समावेश छ।
सेल फोन र ट्याब्लेटहरूको लागि अनुकूलित, टेम्पो ब्रासिलसँग तपाईसँग अन्तर्क्रियात्मक नक्शामा पहुँच छ, घटना वा यात्राको लागि छनौट गरिएको स्थानको सही स्थान पत्ता लगाउन सजिलो बनाउँदछ। एक साधारण तर प्रभावी अनुप्रयोग चाहान्छ जो कोहीको लागि आदर्श।
टेम्पो ब्रासिल डाउनलोड गर्नका लागि, अपरेटिंग प्रणाली छान्नुहोस्: एन्ड्रोइड / आईओएस।
Weather. मौसम पूर्वानुमान
यस अनुप्रयोगको साथ तपाईसँग वास्तविक समयमा सूचनाहरू छन्, व्यावहारिक रूपमा सम्पूर्ण विश्वमा मौसम विज्ञान परामर्श लिन सक्षम हुँदै। रियो दि जेनेरियो देखि लन्डन, न्यू योर्कदेखि टोकियो सम्म, तपाईं हल्का जलवायु परिवर्तनसँग तालिकामा हुनुहुन्छ र एक दिनको लागि तयारी गर्नुहुन्छ तपाई कुनै अप्रत्याशित घटनाहरू बिना नै।
तापक्रम डाटाको साथसाथै मौसम पूर्वानुमानले एक विस्तृत रिपोर्टमा जानकारी प्रदर्शन गर्दछ, दुबै डिग्री सेल्सियस र फरेनहाइटमा। तपाईं वायुमण्डलीय चाप, दृश्यता, हावा आर्द्रता, वर्षा बिभिन्न बिन्दुमा अन्तर्क्रियात्मक नक्शा, बतास गति र दिशा, र अधिकमा पाउन सक्नुहुन्छ।
होइन विजेट अर्को दिन वा हप्ताको मौसम परामर्श गर्न सक्षम हुँदै त्यहाँ सबै जानकारीहरू अद्यावधिक हुन्छन्।
मौसम पूर्वानुमान डाउनलोड गर्न, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
माथिको अनुप्रयोगहरूको साथ, त्यहाँ मौसम र सम्भावित अचानक परिवर्तनहरूको बारेमा विस्तृत जानकारी छ जुन आश्चर्यजनक दिनको लागि योजनाहरू बर्बाद गर्न सक्दछ। वर्षाको लागि सतर्क हुनुहोस् ताकि तपाईं गार्डबाट पक्रिन सक्नुहुन्न!
अब जब तपाइँसँग काममा भिज्न नहुने बारे केही जानकारी छ, कसरी तपाइँलाई १० काउन्टडाउन अनुप्रयोगहरू थाहा छ र विवाह वा त्यो अचम्मको यात्रा सम्म कति समय बाँकी छ भनेर ट्र्याक राख्नुहुन्छ?
भावनात्मकलाई प्रोत्साहन दिन हामी प्रत्येक दिन तपाईंलाई प्रेरणा दिन phrases वाक्यांशहरूको अनुप्रयोगहरू पनि सूचित गर्दछौं। जे होस्, यदि यो पहिले नै वर्षा भईरहेको छ र तपाईं काम गर्न वा विश्वविद्यालयमा जाँदै हुनुहुन्छ भने, हामीसँग तपाईंको सेल फोनमा पुस्तकहरू पढ्न र अध्ययन गर्न वा रमाइलो गर्न गाह्रो क्षणहरूको मजा लिन हामीसँग १० अनुप्रयोगहरू छन्।